Kuzohlomula osomabhizinisi bendawo ngezinhlelo zemeyaIthi - Ilanga News
Home Izindaba Kuzohlomula osomabhizinisi bendawo ngezinhlelo zemeyaIthi
Ithi inezingxoxo nezinkampani ezinkulu ukuba zifukule abasafufusa
IMEYA entsha kamasipala wesifunda iKing Cetshwayo uMnu Thamsanqa Ntuli.
IHLELA ukubuyisa izisebenzi ezaphelelwa wumsebenzi ngesikhathi kuchithwa izinkampani zamanzi ezazinezinkontileka noMasipala waseKing Cetshwayo ukuzama ukulwa nezinkinga zamanzi ezihlasele umasipala wayo imeya yaseKing Cetshwayo, uMnu Thami Ntuli. “Njengamanje amanzi aphakwa ngokwemihlathi, kuleli sonto kuthola ingxenye ethile, aphinde avalwe avulwe kwenye indawo, okuyinto engifuna iphele. La bantu abaphelelwe wumsebenzi ngesikhathi kudilizwa izinkampani ebezenza lo msebenzi, bayadinge ka ukuze kulekelelwane,” kusho uMnu Ntuli. Le meya engene kulesi sikhundla isuka eNkandla lapho ibiphethe khona isikhundla esifanayo, izwakalise ukukhala ngokuthi kunemali engaphezulu kuka R100 million ebeyabelwe umasipala ebuyiselwe emuva ekubeni izakhamizi zaseKing Cetshwayo zibhekene nezinselelo zamanzi, izindlu zangasese nokunye.
UMnu Ntuli uthe le mali ibuyiselwe kumgcinimafa ngenxa yokuthi umkhandlu kamasipala obuphethwe wubuholi obudala nga phambi kokhetho lohulumeni ba-sekhaya olwalumhla ka-1 kuLwezi (November), wahluleka wukuyisebenzisa. “Lokhu kungitshela ukuthi belungekho uhlelo oluqondile lokuxazulula izinselelo zomphakathi. Ngizoqinisekisa ukuthi kayikho imali ebuyela emuva kule minyaka ewu-5 (ngisesikhundleni) ekubeni abantu bekhala kangaka ngezinto ezingakenzeki ngendlela efanele. Njengoba ngiphathiswe isifunda nje, impi enkulu engizolwa nayo wudaba lwamanzi,” kusho uMnu Ntuli.
Uthe uzibekele iminyaka emithathu ukulungisa uda-ba lwamanzi engxenye-ni ewu-90% yomphakathi waseKing Cetshwayo, kubona bonke oma-sipala bayo (uMhlathuze, uMthonjaneni, uMlalazi, iNkandla neMfolozi). Utshele ILANGA ukuthi enye ingqinamba ayibonile, wukungalungiswa kwengqalasizinda yamanzi okwenza angabe esafinyelela ngendlela efanele kubantu. “Ingqalasizinda emumatha amanzi beyigugile, kwezinye izindawo kayikho nhlobo, konke lokho ngizokwenza isiqiniseko sokuthi kuyaphela nya.“Abantu basivotelile bakhombisa ukusithemba, ngakhoke kumele sisebenze ngokuzimisela.
Inkinga yodaba lwamanzi ngangiyibukela ezingeni laseNkandla kuphela kanti ixake ku-bona bonke omasipala bethu abangaphansi kweKing Cetshwayo,” kusho uMnu Ntuli. Utshele ILANGA ukuthi usethu-le u-R35 million wohlelo lwamanzi emawadini awu-4 aseMfolozi, wu-R40 million ozohlinzeka nga-manzi kuward 13 no-14 eNkandla. Kuzokwakhiwa idamu elikhulu eVutshini, eNkandla elizophakela umphakathi omningi. UMnu Ntuli uthe eMthonjaneni nakhona sethuliwe isabelomali sakhona. “Kukho konke lokhu, sizoqinisekisa ukuthi osomabhizinisi abangaphansi kweKing Cetshwayo bayahlomula ngamathuba omsebenzi ukuze kuthuthuke umnotho wakithi. Kuwumsebenzi wethu ukucabangela abantu ngamathuba ukuze bacoshe okuncane,” kusho uMnu Ntuli.
Utshele ILANGA ukuthi njengamanje useqale izingxoxo nezimboni ezinkulu ezingaphansi kwalesi sifunda okubalwa iRBM, ukuba kwenziwe uhlelo lokuthuthukisa osomabhizinisi abancane bendawo. Uthe oso-mabhizinisi bazofakwa emabhukwini omkhandlu ukuze balekelelwe.“Sifuna ukuqinisekisa ukuthi ngisho abazamayo bayasizakala noma ngabe bagunda izinwele, banezitolo ezincane, bagunda utshani nokunye. Konke lokho sizokwenza nezimboni ezakhele iKing Cetshwayo ukuze umnotho wethu usize kakhulu abantu abangaphansi kwesifunda,” kusho uMnu Ntuli.Uthi inkohlakalo yokusetshenziswa kwemali ngendlela engafanele, uzolwa nayo.
Previous articleKuvela isithiyo ngoManyama
Next articleKusolwa izinkinga kushiya umbhishobhi wamaKhatholika